China AC Single-danho 7KW Commercial Charger fekitari uye mutengesi | EN-ndinoiitawo
7KW vezvokutengeserana mundiro rakagadzirirwa pachena kushandiswa ne RFID authentication. Zvaaishandisa aine mhando 2 uchiraira panosangana, ari mundiro inowirirana kana mhando 1 kana mhando 2 waya.
Aiteerera pamwe maindasitiri zvinodiwa, kuti mundiro vanoshandisa Mid vanopupurirwa mita kuitira zvakarurama uye akavaka-mu RCD kuwana kuchengeteka.
The mundiro inogona kwakabatana kuti uchiraira samambure tichibatsirwa EN-Gate suo. Multiple voruzhinji Ndiro imwe nzvimbo zvinogona revatema mu pomumbure pamwe internet mumwe chete kutaurirana kubatana.
Mumwe Type 2 ndinorova panosangana
Mid vaipupurirwa simba mita
Aiteerera pamwe OCPP 1,6 (JSON)
Vose kuzvidzora redunhu uye simba redunhu zviri zvachose voga. Inosimudzira Anti-jamming vanokwanisa nechokwadi yakagadzikana achishanda ezvinhu.
Kungadzivirira rokusika kubva raparadza kana knockdown, kana mafungiro angled riri pamusoro 30 °, chikwata kuchaita vanodimbura simba yaibva, mushumo kukundikana uchishandisa hurongwa, achibvisa chero ngozi.
Simple asi akasimba
kutsamwa regirazi emadziro uye zvose simbi mhosva. IP65 kuchengetedzwa mugwaro kupfuura maindasitiri mureza. Simple uye yakashongedzwa chigadzirwa, ichipa unhu mukati nokunze.
Yakavakirwa yokunyanyisa ezvinhu akadai -30 ° C chando uye chando mwaka kana 55 ° C inopisa uye zvakananga mushana. Core zvikamu kutora maindasitiri giredhi zvinoriumba uye ubayire-gore 15 nepurani upenyu.
Real-nguva akatsvakisisa, kuchengetedza, kutsanya uchiraira to Mobile kushanda. Usazviomesera mubhadharo nzira kusanganisira RFID kadhi, uye pafoni mubhadharo akadai PayPal, AliPay, Apple Pay, etc.
Standby simba kunwa riri shoma sezvo 3 ~ 6W, simba kushanda kuwedzera kaviri pane chete-pamwero chigadzirwa pamisika, kurerutsa oparesheni mutengo.
AC chezita Inzwa Zvinotaurwa
Maitikiro / Lines
1 danho + netural + Pe
AC chezita Output
Wall-pagomo / Floor chemwenje
Mumwe ndinorova nezvigadziko (Type 2)
Green / Yellow / Red ruvara nokuda zvakasiyana chinzvimbo
Kuratidzira ndinorova date
4 mabhatani nokuti chinovhara oparesheni
2pcs Mifare kadhi
5% ~ 95% pasina condensation
Over / Under voltage dziviriro, zadzisa dziviriro, Short redunhu dziviriro, Current leakage dziviriro, Grounding dziviriro, sefungu kudzivirirwa, pamusoro / Under tembiricha kudzivirira
Ethernet / 3G / 4G kutaurirana
Floor chemwenje Shongwe
Single-danho / Vatatu-danho, 4M waya
Single-danho, 4M waya
Fixed Cable panzvimbo Chigadziko
Type1 kana Type 2 charing pfuti pamwe 4M waya
AC Single-danho 7KW Home Charger
Kutungamirira acid Battery Charger
AC Three-danho 2x22KW Commercial Charger
AC Three-danho 22KW Commercial Charger
AC Single-danho 3KW Portable Charger
Ev Cars On Board Charger, Type2 Plug Ev Charging Station, Lifepo4 Battery Charger, Kutungamirira acid Battery Charger, Vara Dc Fast Charger, Ev Dc Charging Stations, All Products